ATOM RPG Trudograd: kuwedzera uko kuchapa zvakawanda kutaura nezvazvo | Linux Vakapindwa muropa
ATOM RPG Trudograd: kuwedzera uko kuchapa zvakawanda zvekutaura nezvazvo
Kutevera mumakwara akafanana neKudonha uye Wasteland, ATOM RPG Trudograd Ikozvino yave kuwanikwa. Kuwedzeredzwa kana kuteedzerana kune yakabudirira yekutanga ATOM RPG, uye yakafuridzirwa nemazita ataurwa pamusoro, iine -kutendeuka-yekutamba-dhizaini dhizaini uye yepashure-apocalypse theme.
Uku kuwedzera kuri kuzvimiririra zvachose, uye hauchazoda zita rekutanga kutamba, inova nhau dzakanaka. Iye anovandudza akabvuma kuti pakutanga yakatemwa sediki DLC yeiyo yekutanga ATOM RPG, asi zvishoma nezvishoma ikakura ikave yakazara shanduro.
Mutambo wevhidhiyo watonongedzera nzira, kubvira zvawanga uri muchikamu chekutanga Chekutanga, yakatotanga kugamuchira akasiyana mibayiro, seyechipiri ye devcom Indie Award 2021, uye Russian LUDI. Izvi zvinopa humbowo kuhunhu hwezita ratakatarisana naro.
Kana iwe uchinetseka nezve iyo features ATOM RPG Trudograd, ndeaya:
Unogona kutanga mutambo nehunhu hutsva kana kuenderera neATOM RPG hunhu. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kusevha faira ine hunhu uye kuritakura kubva kuTrudograd kuburikidza neayo menyu.
Wongorora nyika yakavhurika, iine anopfuura maawa makumi mana emitambo uye nzvimbo dzinopfuura makumi mashanu nevashanu, kubva kune chando post-apocalyptic megalopolis uye kunze kwayo kusvika muchivande Soviet mauto bunkers, hombe pirate mafuta tangi mugungwa rakagwamba nechitsuwa chisinganzwisisike, pakati pezvizhinji.
Shanyira dzinopfuura makumi matatu nzvimbo dzekurwa-chete kwaunogona kurwira akawanda emhando dzakasiyana dzevavengi, kubva kuma mercenaries kusvika kune hutsinye mutant.
Sangana vanopfuura mazana matatu mavara, rimwe nerimwe riine yakasarudzika portrait uye bazi rekutaurirana.
Pedzisa pamusoro pemamishini mazana maviri, mazhinji aine akawanda mhinduro uye mhedzisiro.
Unyanzvi hwakagadzirwa nemaoko hunoshamisirawo uye uhu uchawana mumutambo uyu.
Zvishongedze nemhando dzinopfuura zana dzemhando yezvombo ine anopfuura makumi manomwe neshanu ma mods ekugadzirisa.
Zvidzivirire nekupfeka chero e3 yakasarudzika magetsi eSoviet -stat exoskeleton armor masutu, ane anopfuura makumi maviri nzira dzekugadzirisa nekudzichinjisa kune chero maitiro ekutamba.
Mamwe ruzivo nezve ATOM RPG uye uwane iyo - Chitoro cheStam
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » ATOM RPG Trudograd: kuwedzera uko kuchapa zvakawanda zvekutaura nezvazvo
GameMaker Studio 2: gadziriso yakaburitswa nezvitsva maficha
PeaZip 8.2: nyowani vhezheni pamwe nekuvandudzwa kwekushandisa pakoni